Apple mizara ny haavon'ny fotoana rehetra mandritra ny roa taona | Avy amin'ny mac aho
Apple mizara ny haavon'ny fotoana rehetra ao anatin'ny roa taona
Ny vidin'ny stock an'ny Apple dia niova fironana tao anatin'ny 12 volana latsaka. Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny 2015, raha teo amin'ny haavon'ny tsena ny anjaran'i Apple, no izy no orinasa voalohany manerantany tamin'ny alàlan'ny kapitalin'ny tsena.
Nanomboka nanana ilay orinasa vokatra matotra. Izany hoe, mivarotra iPads, Macs marobe ary mazava ho azy iPhones, anisan'ireo vokatra malaza indrindra. Azo atao ihany ny mivarotra bebe kokoa, miaraka amina zavatra manintona ampy ahafahan'ny mpanjifa manova ny vokatra misy azy ireo ho lasa iray vaovao. Saingy tamin'izany fotoana izany ny famoronana Apple dia tsy teo an-tampony.
Nanomboka tamin'io fotoana io dia nanomboka nihena ny varotra noho ny tsy fahampian'ny vokatra vaovao amin'ny vokatra vokariny ary ny orinasa dia tsy nanatsara ny valiny telovolana azo tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa, noho izany, Apple dia efa kely no karama. SAINGY Nihetsika haingana i Apple: ny fahafahan'ny loharanon-karena goavambe ataon'ny orinasa ahafahany manao lehibe fampiasam-bola amin'ny R&D. Manambola mba hitombo hatranyIo no filozofia nataon'i Apple tao anatin'izay volana vitsy lasa izay. Ny ohatra amin'ny fivoaran'ny iPhones, ny fivoaran'ny MacBook, ary koa ny MacBook Pro farany teo, dia ohatra iray amin'izany.
Apple dia mivarotra androany amin'ny € 134, mbola iray euro ambanin'ny haavon'ny 28 aprily 2015. Saingy ny mpandinika stock dia manondro fa ny lanjan'ilay fizarana dia ambany. Ny fizarana dia tsy nitsahatra nitombo tao anatin'ny efa-bolana. Tamin'ny famoahana farany ny valiny tamin'ny volana Janoary lasa teo, nitombo 7 $ ny vidiny tao anatin'ny iray andro.
Androany, Apple dia iray amin'ireo orinasa sarobidy indrindra, miaraka amin'ny kapitalisma manakaiky ny fito hetsy lavitrisa. Steven milunovich UBS sy mpandalina malaza hafa dia maminavina ny fitomboan'ny tahiry. Nandeha lavitra i Drexel Hamilton ary nametraka ny sanda kendrena ny fizarana amin'ny € 185.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple mizara ny haavon'ny fotoana rehetra ao anatin'ny roa taona
Fiara Juan dia hoy izy:
«Maximum tantara nandritra ny 2 taona», tsy afaka nanohy namaky aho rehefa nahita ny tsy fitoviana
Valiny tamin'i Juancar
Afaho ny Mac anao amin'ny rakitra mavesatra sy tsy misy ilana azy amin'ny File Sumo latsaky ny euro
EXIF App, mamela antsika hahazo ny data EXIF ​​an'ny sarinay